I-Black Shark 2 Pro: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | Iindaba zeGajethi
IXiaomi yenye yezona zinto zisebenza kakhulu kwicandelo leefowuni zemidlalo. Umenzi waseTshayina usishiyile ngeendlela ezininzi, ezinye zazo ziyafumaneka eSpain. Inkampani ngoku ihlaziya olu luhlu ngeBlack Shark 2 Pro. Yeyona fowuni inamandla ukuba ifemi isishiyile ukuza kuthi ga ngoku. Ngapha koko, isebenzisa i-Snapdragon 855 Plus njengeprosesa ngaphakathi.
IBlack Shark 2 Pro iboniswa njengefowuni enamandla kule ndawo. Ilandela uyilo lwezizukulwana zangaphambili zebrendi, kuphela ngemibala engaphezulu, kodwa isishiya nezinto ezimbalwa zobugcisa. Ke yimodeli ebizwa ngokuba inike iimfazwe ezininzi kwintengiso.
Ngokungafaniyo nezizukulwana zangaphambili, basishiya nemibala eliqela kule meko. Inkampani iveza ifowuni nge: Bolt (emnyama-luhlaza), uMdyarho (obomvu-luhlaza), iFlamingo (bomvu-bomnyama), iBlade eqhaqhazelayo (ngwevu-luhlaza) kunye ne-Myth Ray (emfusa-luhlaza). Ukuze wonke umntu abe nakho ukukhetha umbala awufunayo kule meko.
1 Ukucaciswa kweBlack Shark 2 Pro
Ukucaciswa kweBlack Shark 2 Pro
Kwinqanaba lobugcisa, le Black Shark 2 Pro yifowuni enamandla kakhulu. Ukongeza, kuyamangalisa nenqanaba lokuhlaziya kwescreen sayo, kunye ne-240 Hz kule meko, elilelona zinga liphezulu esilifumana kwifowuni namhlanje. Zonke ziyilelwe ukunika amava okudlala amahle kubasebenzisi abayithengayo. Oku kukucaciswa kwefowuni:
Ikhamera esemva: I-48 MP + i-13 MP nge-f / 1.75 kunye ne-f / 2.2 nge-2x zoom kunye ne-LED Flash
Nangona isishiya nesi sikrini ngenqanaba lokuhlaziya, okwangoku kukho imidlalo embalwa exhaswa. Ke le Black Shark 2 Pro yinto yokubheja kwikamva ngumenzi waseTshayina. Kodwa kwangaxeshanye bayasicacisa isakhono sabo sokwenza izinto ezintsha kwaye basibonise into eyahlukileyo kunaleyo eminye imveliso kweli candelo lentengiso ebonisileyo ukuza kuthi ga ngoku. Indlela elungileyo yokuqinisekisa isikhundla sakho njengenye yeempawu ezithandwayo.
Ifowuni iyaphucuka kwizizukulwana ezidlulileyo. I-Snapdragon 855 Plus ikakhulu inoxanduva, Esinika isantya esiphezulu kule meko. Ukongeza, inkampani isishiya neenkcukacha eziqhelekileyo zokuphela okuphezulu kunye nebhetri elungileyo. Into ebalulekileyo kwezi modeli, kwaye ngoku inesakhono se-4.000 mAh. Ewe inentlawulo ekhawulezileyo engama-27W, enkosi apho unokutshaja ibhetri yale Black Shark 2 Pro ngokukhawuleza ngexesha elifutshane.
Le fowuni sele ibhengeziwe e-China, kwiveki ephelileyo, kodwa okwangoku asinazo iindaba malunga nokuqaliswa yale Black Shark 2 Pro eYurophu. Inkampani iqinisekisile ukuba izokwaziswa kungekudala eYurophu, kodwa asinawo umhla othile malunga noku okwangoku. Silindele iindaba ezivela kwinkampani, eziza kwaziswa ngokusemthethweni kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Malunga namaxabiso, kuphela ngamaxabiso efowuni eTshayina aziwayo. Kodwa bayasinceda ukuba sifumane umbono wokuba ingakanani indleko yale Black Shark 2 Pro ekumiselweni kwayo eYurophu. Ifowuni ifika okungenani kwiinguqulelo ezimbini, kwezi ntsuku kubhaliswe ezinye ezimbini, kodwa la ngamaxabiso abo:
Siza kuqaphela ulwazi olusemthethweni malunga nokuqaliswa kwayo eYurophu. Ucinga ntoni ngale fowuni intsha ivela kwitshayina?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Black Shark 2 Pro: Eyona nto inamandla kwimidlalo ye-Xiaomi